Dowlada Britain oo Safiir u soo magacowday Dalka Soomaaliya – SBC
Dowlada Britain oo Safiir u soo magacowday Dalka Soomaaliya
Posted by Webmaster on Febraayo 2, 2012 Comments
Safiirka Dowlada Britain u fariisan Doona Dalka Soomaaliya Mr Matt Baugh ayaa manta waraqihiisa aqoonsiga u gudbiyay madaxweyna Soomaaliya shariif Sheekh axmed Isaga oo socodaal kooban ku tagay Muqdisho.
Safiirka Dowlada Britain ay usoo magacaabatay Dalka Soomaaliya ayaa noqonaya markii ugu horeysay oo safiir Dalka ingiriiska ka socda loo soo magacaabo Dalka Soomaalia waxaana warqadaha aqoonsiga ka aqbalay Madaxweynaha DKMG.
Warkoban oo laga bixiyay Safiirka Britian ay u soo magacowday Dalka Soomaaliya Mr Matt Baugh ayaa la sheegay inuu xafiis KMG ah ka sii dhigan doono Magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya tan iyo inta Amaanka Caasimada uu noqonayo Mid aad u adag.
Magacaabista Safiirkan ee Britain ayaa imaanaya xilli dowlada Ingiriiska ay mudooyinkan Xoojisay taageerada ay siiso dadka iyo Dowlada Soomaaliya iyadoo uga gol leh inay muujiso inay taageerada ay u hayso Xaalada Soomaaliya ee xilligan.
Dhinaca kale soo magacaabashada Safiirka Soomaaliya ee Britain ayaa Imaaneysa xilli lix dublumaasi oo ka socda Wadama Djibouti,Ethiopia,Libya,Sudan Turkey iyo Yemen ay ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho iyaga oo ka furtay Xafiisyadooda Shaqada.
Waxaana Dhawaan sidoo kale Caasimada Soomaaliya laga Furay Xafiiska QM oo horey ugu yaalay Magaalada Nairobi ee Caasimada Kenya kaasi oo iminka loo soo raray Magaalada Muqdisho